Ndị na-enye ọrụ email agbaala Shark | Martech Zone
Ndị na-enye ọrụ Email agbagola Shark
Satọde, Febụwarị 20, 2010 Sunday, June 28, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị mụtaghị ihe okwu ahụ bụ "ima elu na azu" pụtara… ọ pụtara na ọ bụ mmalite nke ọgwụgwụ. Oge a na-ezo aka Happybọchị Obi whentọ mgbe Fonz wụrụ otu shark n'elu mmiri, na-atụba ihe ngosi a n'ime ọnwụ ọnwụ nke ọ na-enwetabeghị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta ọrụ email, atụla m mkpu ma.
Email na-abụbu ọrụ siri ike ma naanị ndị kacha ziga ozi nwere ikike, ngwaike na ngwa iji zipu nnukwu email nke ndị na-enye ọrụ ịntanetị maka ụlọ ọrụ nwere nnukwu ndepụta ndị debanyere aha. Ngwurugwu amalitela ịgagharị na ụlọ ọrụ ahụ, ngwaike aghọwo ụba (karịsịa na igwe ojii) na ngwa na-agbapụta aka ekpe na aka nri iji zipu email.
Industrylọ Ọrụ Email Agbanwe Agbanwe… ọ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe karịa ugbu a
Ihe na-eme n’ime ụlọ ọrụ a bụ ịmụba obere ndị na-enye ọrụ email na-agbapụta. Ha dị egwu - nwee nnukwu ngwa, zipu ozi siri ike dị egwu, soro n'ụzọ zuru oke, lekọta bounces, mbipụta mgbapụta, na-agbaso ụkpụrụ SPAM, ma nwee usoro mwekota siri ike nke na-anaghị akwụ ụgwọ. Ha na-eme ya na obere ego nke nnukwu ụmụ nwoke.
Nke a bụ ihe atụ: Akwụkwọ akụkọ naanị ghọrọ onye nkwado nke Martech Zone (nke ahụ bụ m ngosi). Mgbe m na-enyocha saịtị ha tupu ịnakwere mgbasa ozi ahụ, m lere anya na peeji ọnụahịa ha wee ju m anya na ahịa:
Enwere m ike ịdepụta ndebanye aha nke ihe ruru 100,000 na zipu ozi-e na-akparaghị ókè nye ha $ 530 kwa ọnwa? Nke ahụ dị ntakịrị karịa $ 6,000 kwa afọ. Echetara m mgbe m rụrụ ọrụ na onye na-eweta ozi email na ụgwọ anyị na-akwụ kwa afọ maka obere azụmaahịa gbasara… tinyere ụgwọ izi ozi… API nweta… gbakwunyere, gbakwunyere, gbakwunyere…
Ndị na-eweta email a siri ike ga-aga n'ihu na-agbapụ ya na azụmaahịa izipu ozi ịntanetị ga-abụ ndị mmeri kachasị. Ndị na-efu ya bụ ndị na - eweta ọrụ email dị ukwuu nke nọrọla nwa oge - ihe kwesịrị ịgbanwe.
Nnukwu ndị na-enye ọrụ email na-akọwapụta uwe ha na Mwepụta
Ọtụtụ n'ime ndị na-enye ọrụ email buru ibu ga-agwa gị na oke email ha na-ezigara na-enye ha nkwado na ụlọ ọrụ ahụ ma ha nwere ọnụego nnabata na mmekọrịta ka mma na ndị na-eweta ọrụ Internetntanetị.
Ọ bụghị eziokwu. Obere ndị na-enye ọrụ Email nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ.
Ezigbo enyi m Greg Kraios na-ejikwa ụfọdụ mmekọrịta ndị dị n'etiti ndị na-enye ọrụ email na ndị na-enye ọrụ ịntanetị na ụlọ ọrụ ya, Nzọpụta nke nnyefe. Ọbụna ọ na - enyere ụlọ ọrụ na - ejikwa ozi nke aka ha ozi n’aka ndị ISP! Ọ naghị ewere nnukwu ụlọ ọrụ - ọ na - ewe ezigbo ọkachamara na - enwe ezi mmekọrịta - Greg nwere ha.
Gịnị Email ahịa Dị Mkpa
Ndị na-ahụ maka ọrụ email kwesịrị ịbụ nke enweghị nsogbu (na m na-ekwu na ọ ga-enwe nsogbu) jikọtara ya na sistemụ njikwa ọdịnaya, sistemụ mmekọrịta ndị ahịa, ọdịda ngwaọrụ njikarịcha peeji, nchịkọta ngwa. Ndị na-ere ahịa akpaaka na-amasị Aprimo na Eloqua na-abanyerịrị ụzọ na ndị a. O zughi izipu ma tụọ email ọzọ… ụlọ ọrụ chọrọ karịa!
Ọbụna obere, ngwọta akpaaka email ọnụahịa na-apụta, oke! Microsoft bụ azịza ya na email na njikwa njikwa mmekọrịta ndị ahịa ejikọtara ọnụ.
Ndị ahịa kwesịrị iweghachite ọdịnaya site na ndị na-ajụ ajụ, na-ebuli ọdịnaya ọsọ ọsọ, tụọ nsonaazụ ya - ọbụnakwa nye gị nzaghachi maka ihe mmeri na ihe furu efu. Anyị enweghị oge na-awụlikwa elu si na-ere ihe ngwọta na-ere ihe ngwọta ụbọchị… ma gbalịa tie niile nchịkọta querystrings together… ma nyochaa maka ohere. Ndị na-enye ọrụ email kwesịrị ịgbanwe maka mkpa anyị.
Oge eruola mgbe ndị na-enye ọrụ email ga-amali elu, ma ọ bụ na ọ ga-afụ ha. Mailchimp kwupụtara ọkwa 250,000 agbakwunyere na ọnwa 7 na ngwọta ha. Mana ọbụlagodi Mailchimp dị oke ọnụ ka anyị na-etolite ndepụta anyị nke ọma. Ike gwụrụ anyị maka ụgwọ ego kwa ọnwa ka anyị wee wulite CircuPress - ọfụma email jikọtara WordPress na-echekwa anyị otu ma mekwaa akwụkwọ akụkọ anyị.
Na-Eme Onwe Gị Onye Na-enye Ọrụ Email
Email enweela ogologo oge, nke na-akwụ ụgwọ - mana ọ fọrọ nke nta ka ọ gwụ. Ọ naghị ewe nnukwu mgbalị iji wuo ma debekwa ozi email nke gị ụbọchị ndị a. Enyi Adam Small juru ya afọ na ọnụego na enweghị usoro akpaaka, nke mere n'oge na-adịbeghị anya ọ wuru nke ya Mara iheUgbu a ọ nwere ekwentị, njikwa ọdịnaya, Facebook, Twitter na email zuru ezu maka ndị ahịa ya. Ọbụna o nwere ike inyocha nnabata, egwu mepee ma pịa ma jikwaa bounces!
Ọ bụrụ n’inweghị ikike dịka Adam, ị nwere ike ịga zụta a igbe si folks dị ka Ozi, gbanye ya, gbanye ya, ma nwee ọrụ email gị nke na-arụ ọrụ. Ha ga-enyere gị aka ịmalite.
Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email na ụlọ ọrụ na-agbakwunye ọrụ na ngwugwu nakwa. Ha matara na iwulite ozi ịntanetị mara mma, na-adọrọ adọrọ na-ewe oge na nka - ma nwee nnukwu nloghachi na itinye ego, yabụ ha na-etolite mmemme maka ndị ahịa ha ọnụ ala ma na-ewepụ mbọ niile n'aka ndị ahịa ha. Di na nwunye m ma Emlọ na Tomato.
Olee otú ndị na-enye ọrụ email ga-adị ndụ
Ndụmọdụ m nye ndị na-enye ọrụ email buru ibu n’ebe ahụ bụ ịchọta sistemụ njikwa ọdịnaya, wee zụta ya. Chọta onye nlekọta mmekọrịta ndị ahịa ị na - ejikọ ọnụ yana mer ma jikọta ha. Nweta ihe nchịkọta onye na-eweta ọrụ, ma jikọta ọnụ. Jiri ime ihe siri ike, nkewa na ule mee ya. Ọ bụrụ na i meghị, mmadụ ga-adịghị anya!
Tags: okirikirionye na-enye ọrụ emailespmailchimp
Ntuziaka Anọ Maka Ọdịnaya Weebụ Na-aguta
Ngwongwo ala na mmekorita nke ndi mmadu
Feb 20, 2010 na 3:44 PM
Nke a bụ nnukwu edemede Doug. E nwere ọtụtụ ihe ngwọta dị ugbu a iji nyere aka ịzụ ahịa azụ ahịa ahịa email. Ekwenyere m n'ezie na ohere ọtụtụ ESP bụ kpọmkwem ihe ha nọrọ ọtụtụ afọ na-ezere - nke ahụ bụkwa ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-abawanye uru ịre ma kwado ngwanrọ, ọ na-esiwanye ike na-ere mgbe ahịa na-ejupụta ka ọ dị. Ọ bụrụ na ESP nwere ike inye ụlọ ọrụ ezigbo ihe ịga nke ọma (karịa sọftụwia, mana zụta atụmatụ mkpọsa na mkpụrụ), nke ahụ bara uru karịa ịchọta ngwa iji zipu email (90% nke arụmọrụ sọftụwia email) bụ otu ihe ahụ). Gwakọta ọrụ ndị ahụ na isi ihe njikọ siri ike ị nwere ngwugwu kwesịrị ịkwụ ụgwọ.
Feb 22, 2010 n’elekere 10:11 nke abali
Nke a bụ otu ihe ederede kachasị amasị m, ọ bụghị naanị n'ihi na ị na-enye Indiemark isi. 🙂
Feb 24, 2010 na 5:05 PM
Ọ na-amasịkarị m ịmepụta email na obere mkpirisi na jaket akpụkpọ anụ. Nke ahụ adịghị mma? Akwa isiokwu. Na ngalaba maka ọrụ ị na-eme, m ga-achọ ịtụba davemail (www.mydavemail.com) dịka nhọrọ. Ndị ahịa anyị na-akwụsịkarị ịnwa ime ya n'onwe ha. Dika otutu nke ndi n’enye intaneti DIY bu, ha abughi ndi obula. Daalụ maka ịkọwa nhọrọ ndị ahụ.
Data Ndị Ahịa Ogo bụ isi ihe maka ịga nke ọma na mkpọsa ahịa ọ bụla. Onwere otutu ulo oru ndi n’enye ahia nke onwe gi ma obu meere gi ahia zuru oke. Mana, ọnweghị onye n'ime ha nwere ike iwepụta data ndị ahịa belụsọ gị na azụmaahịa gị.
Azụmaahịa (ụlọ ahịa na-echekwa n'ihu) kwesịrị ịchọ ụzọ iji “nakọta” ozi ndị ahịa yana “kechie” ya azụ na ịzụrụ ihe ha (nke a dị mfe maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, mana ọ bụghị maka anụ ahụ n'ihu) na usoro POS gị ma mee ka ozi ahụ dị maka ebe ịre ahịa gị (email ma ọ bụ SMS ma ọ bụ ndị ọzọ). Ezi ike nke ahia di na nyocha ihe ndi na-achoghi na ihe ndi choro na ndi choro ya ma nye ha onyinye di nma.
Jun 13, 2012 na 12:56 AM
Ndewo ekele nke ukwuu maka post nghọta, achọtara m blọọgụ gị na ndudue mgbe m na-achọ Google maka ihe ọzọ… .Enyere m aka na saịtị gị..nkekọrịta ịkekọrịta ..
Apr 29, 2013 na 1: 29 AM
Ana m achọ ma ọ bụrụ na e nwere ndị na-eweta webmail na-ekerịta uru na ndị na-enyefe aha ngalaba ha maka iji ozi eme ihe?